Madaxweynaha Jabuuti oo warbixin ka siiyay Qaramada Midoobay xaaladaha Soomaaliya & Itoobiya | Allbalcad Online
Home WARARKA Madaxweynaha Jabuuti oo warbixin ka siiyay Qaramada Midoobay xaaladaha Soomaaliya & Itoobiya
Madaxweynaha Jabuuti oo warbixin ka siiyay Qaramada Midoobay xaaladaha Soomaaliya & Itoobiya
Madaxweynaha Jabuuti Ismaciil Cumar Geelle ayaa xalay khudbad horay loo duubay ka jeediyay shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka, isaga oo ka hadlay arrimo dhowr ah.
” Jabuuti waxaa ka go’an inay markasta ka Shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan nabad waarta iyo isdhex-gal dhaqaale oo adag oo heer degmo ah oo ay ka wada faa’iidyestaan dhamaan dadyowga ku nool dalalka Geeska Afrika ayuu yiri” Madaxweyne Geelle.
Madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlayay Arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay soo dhaweyneyao horumarada ka socda Soomaaliya, sidoo kalena Golaha Ammaanka ee QM ay la wadaageyso walwalka ay ka qabaan xaaladda hadda ay mareeyso Soomaaliya.
Khudbadda Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar oo aad u dheereed ayaa waxaa uu kaga hadlay xaalada Itoobiya, waxaana uu sheegay in ay la socdaan xaalada kajira Itoobiya, isla markaana uu rajo ka qabo inay dadku si nabadgelyo ah u wada deganaadaan.
Previous articleFalcelin ka dhalatay fashilka ku yimid dhex-dhexaadintii Farmaajo & Rooble
Next articleMaxkamadda ICJ oo shaacisay xilliga ay ku dhawaaqeyso natiijada dacwadda Badda